Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne Tasarruflu Aydınlatma | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliIgwe ọkụ eletrik na-arụ ọrụ nke ọma na Kocaeli Intercity Bus Terminal
ezigbo ọdụ ụgbọ ala intercity
Otu n'ime ndị mmekọ Kocaeli Metropolitan Municipation, TransportationPark A.Ş. Echekwara ọkụ eletrik 69 site na dochie ọkụ ọkụ ochie na Intercity Bus Terminal, nke ụlọ ọrụ ahụ na-arụ.
Obodo ukwu, nọmba 150 nke ọkụ elekere na ọdụ ụgbọ ala na-arụ ọrụ nke ihe ọkụ 90 LED dị ugbu a site na iji dochie ọkụ karịa, enwetara ego dị ala. Site na usoro ọhụụ, ọkachasị na mpaghara ebe ndị njem na-abanye ọnụ ma banye bọs, a na-enweta ebe ndị na-egbuke egbuke ebe ụmụ amaala na-enwe ike ịrụ ọrụ ha n'ụzọ dị mfe.
480W LED PROJECTOR LOCATION 150W
Kocaeli Intercity Bus Terminal ejiri na sistemu ochie 150 480 watts bulbs na teknụzụ ọhụrụ 90 150 watts duuru bọlbụ ndị nọchiri anya Metropolitan Municipal, pasent 69'luk. Ọkụ na-eduga na-akpaghị aka site na oge ọchịchịrị ya, na-ekepụta ohere na-enwu gbaa karịa na mpụga ọnụ ọnụ ụlọ, na-echekwa ego. Mmetụta nke bọl ọhụrụ a enwewokwa ike inweta akara zuru oke site n'aka ụmụ amaala na-eme njem na ndị na-ere ahịa na ọdụ ahụ.
Ụzọ mbata na ebe ụgbọala nke Kocaeli Intercity Bus Terminal Revised 20 / 06 / 2018 Obodo Kocaeli mebere obodo bọs intercity. Maka ebe a na-adọba ụgbọala ndị na-abanye ọdụ ụgbọ ala mfe, emere ndokwa n'ime ebe a na-adọba ụgbọala. Edoghi edo edo kewapụrụ oghere ebe a na-adọba ụgbọala. 11 puku square mita…
Ụgbọ njem TransportationPark na-ahụ maka nnụnụ na mkparịta ụka na-arụ ọrụ ụgbọ ala 29 / 03 / 2019 Nchebe nke Kocaeli Metropolitan Municipation, TransportationPark A.Ş. anaghị efe nnụnụ na Kocaeli Intercity Bus Terminal. TransportationPark, nke na-akwado mkpa nchekwa nke ndị njem, na-enye ụdị ıyla niile
Nkwadebe Kocaeli Intercity Bus Terminal maka Bayram 08 / 08 / 2019 Kocaeli Intercity Bus Terminal na-ahụ njupụta nke Kurba Feast. Na mgbakwunye na idebe ubochi niile, a na-eme nhicha ahụ zuru ezu iji hụ na ụmụ amaala nọ na ebe a na-ehicha ọcha, nke sara mbara na ịdị ọcha.
Kocaeli Intercity Bus Terminal na-anabata ndị ọbịa 42 puku ndị ọbịa 20 / 08 / 2019 Ationgbọ njem, ngalaba enyemaka nke Kocaeli Metropolitan, ekwuputala na o meela ọtụtụ ihe megide oke ike enwere ike tupu Eid al-Adha. TransportationPark, nke na-arụ ọrụ nke Kocaeli Intercity Bus Terminal, enweghị nsogbu dị iche iche
Kocaeli Intercity Bus Terminal Drainage Sistem Na-adịkwa Ọhụụ 26 / 08 / 2019 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni devraldığı günden itibaren yaptıkları yeniliklerle gerek vatandaşların gerekse terminal esnafının yüzünü güldürdü. Son olarak yoğun yağışlarda terminalde yaşanabilecek su basmalarının…
Ụgbọ njem TransportationPark na-ahụ maka nnụnụ na mkparịta ụka na-arụ ọrụ ụgbọ ala